Xildhibaanno ku kala aragti duwanaaday soo bixistii Madaxweyne Lafta Gareen – Kalfadhi
Xildhibaanno ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku kala aragti duwanaaday faa’iidada ay Koofur Galbeed Soomaaliya (KGS) u leedahay kusoo bixistay Madaxweyne Cabdicasiis Lafta Gareen ee doorashadii maanta ka dhacday magaalada Baydhabo.
Xildhibaan Maxamed Xuseen (Afaraale), oo ku sugan magaalada Baydhaba ee gobalka Baay, sidoo kalane ka tirsan wafdiga Dowladda Federaalka Soomaaliya (DFS) ka socda ee kor joogtada ka ahaa doorashada, ayaa sheegay iney doorashada maanta ka dhacday Baydhaba ay Xor iyo Xalaalba ahayd, ayna kuwada qanceen dhamaan dhinacyadii tartanka u dhaxeeyay iyo xubnihii kor joogtada ahaa ee ka socda DFS.
“Doorasho cadaalad ah, oo caalamka oo dhan laga fiirsanayay islamarkaana xor ah, dhinacyada oo dhanna ku qanceen, ayaa maanta ka dhacday Baydhaba, waxaana ku guuleystay Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen), oo ah Madaxweynahii Labaad ee Koofur Galbeed, waxaana u rajeynayaa inuu wax badan ka qaban doono arrimaha ka taagan Koofur Galbeed ee ammaanka, siyaasadda iyo bini-aadinimada ah” ayuu yiri Xildhibaan Maxamed Xuseen (Afaraale).
Balse, Sanatar Xuseen Sheekh Maxamuud, oo ka tirsan Xildhibaanada Aqalka Sare ka soo galay Koonfur Galbeed Soomaaliya (KGS), ayaa isaguna doorashadii magaalada Baydhabo ee maanta ku tilmaamay mid aan cadaaalad ahayn, islamarkaana sida KGS loogu doortay Madaxweyne aysan ku qanacsaneen, sida uu hadalka u dhigay.
“Waxa maanta ka dhacay Baydhaba muddo ayaa ka soo digeynay; doorasho xor ahna kama dhicin Baydhaba, oo qof ayaa loo keenay shacabka Koofur Galbeed, ha yeeshee shacabka iyo Madaxweynaha la keenay waxaan ugu baaqayaa iney wadashaqeeyaan afarta sano ee soo socota, si aan dib loogu laaban qalalaaso kale oo siyaasadeed” ayuu yiri Sanatar Xuseen Sheekh Maxamuud.
Xildhibaan Afareele waxaa sababta uu Madaxweyne Lafta Gareen ugu arko inuu yahayb Madaxweynihii ay u baahneyd KGS ku sheegay iuu yahay aqoon-yahaan la shaqeyn kara DFS, waxa uuna wax iska caadi ah ku tilmaamay in dowladdu ay taageeri karto murashaxii ay u uragto inuu la shaqeyn karo Madaxda Qaranka.
“Waxaan la yaabanahay dadka dhahaya Lafta-gareen dowladda ayaa wadata. Koofur Galbeed waxay ka tirsan tahay Soomaaliya. Dowladda qofkii ay u aragto inuu la shaqeyn karo waa taageeri kartaa, aduunka ayeyna ka dhacdaa taasi. Wax qalad ah malahan, waana dacaayad raqiis ah” ayuu yiri Xildhibaan Afaraale oo la hadlay kalfadhi.
Hase ahaatee, Sanatar Xuseen Sheekh Maxamuud waxa uu sheegay in Cabdicasiis Lafta-gareen, Madaxweynaha cusub ee Koofur Galbeed, looga baahan yahay inuu daacad u noqdo dadkiisa iyo deegaanka uu ka soo jeedo, maadaama uu guuleystay, isagoo kula taliyay dhamaan xubnaha ka soo horjeeda iney siiyaan fursad lagu tijaabiyo Madaxweynaha cusub ee ay maanta doorteen Xildhibaanada KGS.
“Aniga, waxaan ku talin lahaa in la siiyo fursad. Waa muwaadin Koofur Galbeed, waxna waa qaban karaa. Dadka ka soo horjeeda sidayda oo kale, waxaan ka codsanayaa iney jaanis (fursad) siiyaan afar sano, ugu yaraan laba sano oo aan la gelin qalqal siyaasadeed iyo mucaaradnimo” ayuu yir Xuseen Sheekh Maxamuud oo ka tirsan Aqalka Sare ee BFS.